Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/anana
Proverbe 202 Aleo anana ampian-tsetsetra , toy izay matavy arahin-dromoromo . [Rinara 1974 #108]
Proverbe 2478 Horirika amonosam-panasina , ka ny fonosina lo mbam-ponony . [Veyrières 1913 #4348]
Proverbe 2768 Jiolahy homana anana ka homan-tsy fidiny. [Rinara 1974 #1564]
Proverbe 2921 Kitoatoa vary amin’ anana: ao ny sendra hena, fa ny sendra sakay dia mirehoka . [Veyrières 1913 #2710, Cousins 1871 #1272, Houlder 1895]
Proverbe 3598 Manao sotrobe lava tango : mahay atsy, mahay aroa. [Rajemisa 1985]
Proverbe 3786 Manidina am-paniriana toa anana . [Rinara 1974 #2107]
Proverbe 3821 Manokana anana . [Veyrières 1913 #6567]
Proverbe 4005 Mba ataovy toy ny anana lahy, ka raha maniry, tsongoy . [Houlder 1895]
Proverbe 4062 Miangolangola mitenda fararano : ny vary tsy lany , ka anana indray no tadiavina . [Veyrières 1913 #2722, Cousins 1871 #1724]
Proverbe 4534 Mody adala, ohatra ny jiolahy homana anana. [Cousins 1871]
Proverbe 4633 Mpiantsena mitsongo anana an-dalana : ny any an-tsaha aza hidinana , ka ny efa hita maso indray ve no havela ? [Rinara 1974]
Proverbe 4823 Natao rapa-dango ny anana an-toriny , ka nitsongo anana an-kady no niafarana ! [Rinara 1974 #178]
Proverbe 5386 Ny mpanompo toy ny voan' anana , ka raha kasihina poritra . [Rinara 1974 #3161]
Proverbe 5966 Rafotsibe manandrana anana : tsy milaza ny hafiny, fa ny masony mangarika ihany. [Veyrières 1913 #1899, Houlder 1895]
Proverbe 6114 Raha mpamosavy azo nanitsaka, ataovy toy ny anana, ka raha maniry, tsongoy . [Houlder 1895]
Proverbe 6555 Sendrasendra vary amin' anana . [Veyrières 1913 #6154]
Proverbe 7300 Torimasom- -bavi antitra ka vita am--pitsongoana anana ihany. [Rinara 1974 #273]
Proverbe 8020 Valin' ny anana hena , valin' ny hena anana . [Veyrières 1913 #894]
Proverbe 8051 Vary amin' anana . [Veyrières 1913 #6158]